ကာရာအိုကေ ဆိုရန်...KaraFun Player... | အိမ်လွမ်းသူ...
သူငယ်ချင်း အားလုံးအတွက် အခုတင်ပေးလိုက်တဲ့ KaraFun Software...လေးကတော့ ကွန်ပြူတာဖြင့် ကာရာအိုကေသီချင်းဆိုချင်သော ဘော်ဒါတွေအတွက်ပါ..Player...လေးတစ်ခုဆိုရင်လည်း မမှားပါဘူး...အပြင်းပြေပါတယ် တစ်ခါတလေ စိတ်ညစ်လာရင် သီချင်းဆိုတာက ထွက်ပေါက်တစ်ခုလို့ထင်တယ် ဒါကြောင့် အားလုံးအတွက် မျှဝေပေးလိုက်တာပါ...စိတ်ဝင်စားတဲ့ ဘော်ဒါတွေယူသွားပါ....
အသုံးပြုရန်။ ။ You Tube..မှ ကာရာအိုကေ Version..ကိုရှာ ရလာတဲ့သိချင်းကို AVI..format ပြောင်းလိုက်ပါ..မိမိရဲ့ Computer ထဲမှာ folder တစ်ခုဆောက်ထားပါ...ပြီးသွားရင်KaraFun Player လေးကိုဖွင့်လိုက်...Player ထဲမှာ ကိုဆောက်ထားတဲ့ folder..ကိုဖွင့် ဆိုချင်တဲ့ သီချင်းကို play..ပြီးရင် Recod..လုပ်ထား ဆိုပြီးသွားရင် SAVE..လုပ်ထားရပြီပေါ့.... (FLV...ဆိုရင် ဆိုလို့ မရပါဘူး...။)
Download...ဒီမှာဗျို့... တင်ပေးထားတယ် media fire လေးနဲ့....
1 Response to ကာရာအိုကေ ဆိုရန်...KaraFun Player...
English - Myanmar Dictionary..
MP4 သီချင်းတွေပြောင်းရန် Any Audio Converter...
Window Media Player....အပိုင်း(1)
Window Media Player....အပိုင်း(2)
Window Media Player....အပိုင်း(3)
Win7 Logon Background Changer...
Window Media Player....အပိုင်း(4)